Abwaan Siciid Maxamuud Gahayr Oo Ka Dayriyey Xaalad Uu Sheegay In uu Ku soo Arkay Mid Ka Mida Xabsiyada Hargeysa – somalilandtoday.com
Abwaan Siciid Maxamuud Gahayr Oo Ka Dayriyey Xaalad Uu Sheegay In uu Ku soo Arkay Mid Ka Mida Xabsiyada Hargeysa
Markii gaadhigu marayay Saldhigga Axmed-Dhagax oo maxaabiis lagu dejinayo ayaa la yidhi “Kanna xareeya”. Waan ka cudur-daartay, aniga oo jeclaa in la fuliyo amarkii geynta Saldhigga Dhexe, haddii goob kale la ii walwaalayo waxa aan jeclaa Saldhigga New Hargeysa oo ii dhawaa. Lama yeelin codsigayga, si jujuub ah ayaa la igu rogay. Waan is-giijiyay, markii ay qarka u fuushay in la guulo ayaan guddoomay in la igu handaraabo Axmed-Dhagax. Suunkii iyo kabihii ayaan isku xidhay. Furihii gaadhiga oo aan watayna waa aan u dhiibay.